ဗေဒင်နက္ခတ် Archives - Padaethar
January 16, 2021 by Padaethar
သောကွာသားသမီးတှရေဲ့ သိကောငျးစရာ (၁၁) ခကျြ တဈယောကျဆိုတဈယောကျပဲ သစ်စာရှိရှိ ခဈြတတျကွတာ သောကွာ ကိုယျ့ခဈြသူအပျေါမှာအပွငျပနျးက ဂရုမစိုကျသလို နတေတျပီး အမွဲတမျးတှေးပွီးပူပနျပေးတတျတာ သောကွာ ဝမျးနညျးတတျတဲ့စိတျကိုအပွငျကိုထုတျပွလမေ့ရှိပဲစိတျထဲကပဲ ကြိတျပွီးဝမျးနညျးနတေတျတာ သောကွာ ဖွဈလာသမြှအရာရာကို ရငျဆိုငျရဲသလိုဖွဈမလာသေးတဲ့အရာတှကေိုလဲကွိုပွီးစဉျးစားတတျလရှေိ့တာ သောကွာ အပွငျပနျးကွညျ့ရငျမာနကွီးတယျလိျု့ ထငျရလောကျပမေဲ့ တကယျတမျးပေါငျးကွညျ့မှ ပေါတောတောလေးမှနျးသိရတာ သောကွာ စိတျကူးယဉျခွငျးကို မကျမောပွီး တခါတလတေဈယောကျထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနရေတာကို သဘောကတြာ သောကွာ စိတျရှုပျရမယျ့အရာတှကေို သိပျမတှေးပဲ အမွဲတမျး ပြျောပြျောနတေတျတာ သောကွာ မသိတဲ့သူတှနေဲ့ဆို ရခေဲတုံးလို့ အရမျးအေးပီး အရမျးခငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ကွားမှာဆို စကျသနေပျပဈသလို မနားတမျး လပေဈတာ သောကွာ သူတို့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ဘယျသူ့မှ ရငျဖှငျ့လမေ့ရှိပဲ တြောကျထဲ ရငျထဲမှာအမွဲ သိမျးထားတာ သောကွာ လကျြဝှကျတဲ့ နရောမှာဆို ဘယျနနေံ့နဲ့မှ … Read more
ယခုလာမည့် New Year 2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်နှင့်အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နမိတ်…
December 21, 2020 by Padaethar
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ တားရော့ကတ်လေးကပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့အနာဂတ် လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ မသိချင်တဲ့လူတော့ မရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်။ တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဗေဒင် လက္ခဏာတွက်ပြီး လေ့လာကြသလို တစ်ချို့ကြတော့လည်း တားရော့ကတ်လေးတွေကြည့်ပြီး လေ့လာကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ကို တားရော့ကတ်လေးတွေကတစ်ဆင့် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံး တာရောဒ့်ကတ်လေးကို ရွေးပြီး အနာဂတ်ကို လေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်။ (၁) နံပါတ် ၁ အတိတ်က သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူလေးတစ်ခုကြောင့် အခုအချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ လက်လွှတ်လုနီးပါးဖြစ်နေရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက အတိတ်က သင့်ရဲ့မာနတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူလေး တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ ဒီလူကိုတွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးသေးသေးလေး ကျန်နေသေးတဲ့အတွက် ထပ်ပြီးလက်လွှတ်မခံဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ သင့်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခု … Read more
သင့် မွေးလအလိုက် အရမ်းမှန်သော စိတ်နေ သဘောထားများ
November 17, 2020 by Padaethar
မွေးလ အလိုက် စိတ်နေ သဘောထားများ January – အေးအေးလေး နေတတ်သူ ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းနိုင်သူ အချစ်ကြီးတယ် သံယောဇဉ်တွယ်တာ မြန်တယ် မေ့နိုင်တဲ့စိတ် မွေးဖွားတတ်တယ်။ February – အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ဘူး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုတတ်တယ် ။အမုန်းမပွားဘူး တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်တတ်သူ….။ March – ဒေါသထွက်လာရင် ဘာမှ မကြည့်တော့ဘူး အရွဲ့ အရမ်းတိုက်တယ် အားနာတတ်တယ် ကူညီချင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်။ သနားတဲ့ စိတ်ကြောင့် ခံစားနေရတတ်တယ် အရမ်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ April – တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် အတွေးများစွာနဲ့စဉ်စားနေတတ်ကြတယ် ဦးဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ချင်စိတ်ရှိသည်။ ဒေါသ ကြီးတယ် ဘာပဲ … Read more
လူတိုင်း လွယ်လွယ်လေး တွက်ကြည့်လို့ရတဲ့ သင့် မွေးသက္ကရာဇ် နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်များ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ကိုယ်မွေးတဲ့ ရက်၊လ၊နှစ်တွေက ကိုယ့်အရည်အသွေးနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြနေပါတယ်။ မွေးသက္က၇ာဇ်က ပြောတဲ့အသံတွေကို တစ်ခါလောက် နားစွင့်ကြည့်ရအောင်။ တွက်နည်းက လွယ်ပါတယ်။ မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ်ကို ဂဏန်းတစ်ခုတည်းရအောင် ပေါင်းရမှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြပါမယ်။ မတ် ၂၀ ၁၉၅၀ ၃+၂၀+၁၉၅၀ = ယ၁၉၇၃ ၁+၉+၇+၃ = ၂၀ ၂+၀= ၂ သည်တော့ ၂ ကို သွားကြည့်ရမှာပါ။ အခု ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းချက်တွေကို ကြည့်ရအောင်။ ၁ ဂဏန်းသမား မူလရင်းမြစ် ၂ ဂဏန်းသမား ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင် ၃ ဂဏန်းသမား ပျော်ရွှင်မြူးထူးတဲ့သူ ၄ ဂဏန်းသမား … Read more
ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍ တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည်
ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍ တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား ထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ထီးဖွူနက်ခတျကိနျးနှငျ့အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဆိုကျ၍တနင်ျဂနှသေားသမီးနှငျ့ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားထီပေါကျကိနျးရှိသညျ၂၀၂၀ ၊နိုဝငျဘာလတှငျနသေ့ားသမီးအသီးသီးအလိုကျရတနာပုံကိနျးဆိုကျခြိနျမရှိသဖွငျ့အောကျဖျောပွပါနက်ခတျမြားဖွငျ့ တိုကျဆိုငျသညျ့ဗုဒ်ဓဟူးနှငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားထီကံစမျးနိုငျသညျ။အဓိပတိနက်ခတျကိနျးဖွငျ့ဗုဒ်ဓဟူးနသေ့ားသမီးမြား၂၅. ၁၁.၂၀၂ဝဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့နကျ၁ဝနာရီမှနံနကျ၁ဝနာရီ၃ဝမိနဈအတှငျးထီးဖွူနက်ခတျကိနျးဖွငျ့တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား၂၉.၁၁. ၂၀၂ဝတနင်ျဂနှနေေ့ (တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နေ့)နလေ့ညျ၂နာရီ၅ဝမိနဈမှနလေ့ညျ၃နာရီ၁၅မိနဈအတှငျးထီကံစမျးနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။တနင်ျဂနှေ၊ဗုဒ်ဓဟူးနနေံ့မြားဖွငျ့စတငျမှညျ့ချေါသောမွို့၊ရှာ၊ဒသေမြားမှလညျးထီဆုကွီးဆှတျခူးနိုငျပါသညျ။ မိမိတို့၏ဇာတာခှငျပါထီပေါကျကံအားနက်ခတျဥယြာဉျတှငျကသြငျ့ငှပေေးသှငျးပွီးဆနျးစဈနိုငျပါကွောငျးလေးစားစှာဖွငျ့အသိပေးအပျပါသညျဦးဇယြောကို(နက်ခတျဥယြာဉျ)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉ zawgyi ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍ တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများထီပေါက်ကိန်းရှိသည်၂၀၂၀ ၊နိုဝင်ဘာလတွင်နေ့သားသမီးအသီးသီးအလိုက်ရတနာပုံကိန်းဆိုက်ချိန်မရှိသဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါနက္ခတ်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများထီကံစမ်းနိုင်သည်။အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ၂၅. ၁၁.၂၀၂၀ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၁၀နာရီမှနံနက်၁၀နာရီ၃၀မိနစ်အတွင်းထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ၂၉.၁၁. ၂၀၂၀တနင်္ဂနွေနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့)နေ့လည်၂နာရီ၅၀မိနစ်မှနေ့လည်၃နာရီ၁၅မိနစ်အတွင်းထီကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံများဖြင့်စတင်မှည့်ခေါ်သောမြို့၊ရွာ၊ဒေသများမှလည်းထီဆုကြီးဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ဇာတာခွင်ပါထီပေါက်ကံအားနက္ခတ်ဥယျာဉ်တွင်ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီးဆန်းစစ်နိုင်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်ဦးဇေယျာကို(နက္ခတ်ဥယျာဉ်)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉
နာမည်အစ စာလုံးက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကြောင်း
November 15, 2020 by Padaethar
နာမည်အစစာလုံးက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကြောင်း ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်လို့ ယုံပါရဲ့လား။ ဥပမာ သူ့နာမည်က Su Su ဆိုရင် နာမည်အစ စာလုံးက S ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့နာမည်အစစာလုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိချင်တဲ့လူရဲ့ နာမည်အစစာလုံးကိုကြည့်ပြီး သူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ A, H, I, O, Y ဂျိုကာနဲ့တူတဲ့လူတွေပါ။ လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဝမ်းနည်းတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူမှမသိအောင် ကြိတ်ခံစားပြီး …. ကိုယ့်ကြောင့် သူများစိတ်မညစ်အောင် နေတတ်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။ အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေပြတတ်တော့ လူချစ်လူခင်ပေါတယ်။ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းတယ်။ အချစ်ရေးမှာ ကျန်ရစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာများတယ်။ စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့အထဲမှာလည်း ပါတယ်။ B, C, L, … Read more
နာမည်ကိုသိရုံနှင့်် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-သြ – ဧ = ၁ က-ခ-ဂ ဃ -င = ၂ စ-ဆ-ဇ-ည-ဈ = ၃ ရ-ယ-လ-၀ = ၄ ဖ-ပ-ဘ-မ-ဗ = ၅ သ-ဟ = ၆ ဓ-ဒ-န-တ-ထ – ဌ = ၇ (#ဥပမာတွက်ပြမယ်) _ ဇော် မင်း ထက် = ၃ + ၅ + ၇ = ၁၅ = … Read more